Donation of Disinfection to Social Welfare Association
COVID-19 virus has the potential to survive in the environment for several days. Disinfection of our Environment and household is very important for the prevention of COVID-19. We need to clean not only our hands but also our neighbors.
Pandemic Prevention 2020
Nowadays, the new virus of COVID-19 is spreading all over the world. COVID-19 has been described asapandemic by the World Health Organization. COVID-19 is one of the viruses that cause illnesses ranging from the common cold to more severe diseases. This virus is transmitted through the respiratory system typically through coughing and sneezing, or direct touching of infected surfaces or persons.
Prevention is the best type of health care withapurpose to focus on health care by treating the pre-conditions that cause sicknesses, thereby maintaining wellness and good health. It is important because it helps us stay healthy and accesses prompt treatment when necessary. It can also help reduce our overall medical expenses. Now the new virus of COVID-19 is spreading all over the world. COVID-19 has been described asapandemic by the World Health Organization.
COVID-19 ဗိုင်းရပ်စ်သည်ပတ်ဝန်းကျင်တွင် ရက်ပေါင်းများစွာ အသက်ရှင်သန်နေထိုင်နိုင်သည်။ COVID-19 ကာကွယ်ခြင်းတွင် ကျွန်ုပ်တို့၏ပတ်ဝန်းကျင်နှင့်နေ့စဉ်သုံးပစ္စည်းများ ပိုးသတ်ရန် အလွန်အရေးကြီးပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏လက်များသာမက ပတ်ဝန်းကျင်များကိုပါ သန့်ရှင်းရေးလုပ်ရန်လိုအပ်ပါသည်။
COVID-19 ဗိုင်းရပ်စ်အသစ်ဟာ ယခုအခါတွင် ကမ္ဘာအနှံ့ကူးစက်ပျံ့နှံ့နေပါသည်။ COVID-19 ကို ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့က ကမ္ဘာကပ်ရောဂါအဖြစ် သတ်မှတ်ခဲ့ကြပါသည်။ COVID-19 သည် အအေးမိခြင်းနှင့် ပြင်းထန်သောရောဂါများမှ စတင်ဖြစ်ပွားစေသောဗိုင်းရပ်စ် တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းဗိုင်းရပ်စ်သည်အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာစနစ် (ချောင်းဆိုးခြင်းနှင့်နှာချေခြင်းမှတစ်ဆင့်) သို့မဟုတ် ကူးစက်မှုရှိသောသူများနှင့်တိုက်ရိုက်ထိတွေ့ခြင်းမှလဲ တဆင့်ကူးစက်နိုင်ပါသည်။
ကြိုတင်ကာကွယ်ခြင်းဆိုသည်မှာ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု အမျိုးအစားတစ်ခုဖြစ်ပြီး ရည်ရွယ်ချက်မှာ အနာရောဂါကုသခြင်းမှစပြီးကျန်းမာလာခြင်းနှင့် ကျန်းမာရေးကိုကောင်းမွန်စွာ ထိန်းသိမ်းနိုင်ခြင်းတို့ဖြစ်ပါသည်။ ကြိုတင်ကာကွယ်ခြင်းသည် ကျွန်ုပ်တို့အားကျန်းမာလာအောင်ကူညီပေးခြင်း၊ လိုအပ်ပါက ချက်ချင်းကုသမှုခံယူနိုင်ခြင်း နှင့် ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာကုန်ကျစရိတ်များကိုလဲလျော့ချပေးပါသည်။ ယခုအခါတွင် COVID-19 ဗိုင်းရပ်စ်အသစ်ဟာ ကမ္ဘာအနှံ့ကူးစက်ပျံ့နှံ့နေပါသည်။ COVID-19 ကို ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ကကမ္ဘာကပ်ရောဂါအဖြစ်သတ်မှတ်ခဲ့ကြပါသည်။
ဘေးအန္တရာယ်ကင်းဝေးစေရန်နှင့်၊ ကောင်းသောအကျိုးများဖြစ်ပေါ်စေရန် ပရိတ် တရားတော်များကို ရွတ်ဖတ်ပူဇော်လေ့ရှိပါသည်။ ပရိတ်၏ အဓိပ္ပါယ်မှာ ကာကွယ်ပေးခြင်း၊ တားဆီးပေးခြင်းဟု အဓိပ္ပါယ်ရပါသည်။
The best protections for preventions of contracting this virus are washing hand, social distancing, avoiding crowded areas and usingamask in public areas.
Land Purchasing for Kyeethakya Village
A Kyeethakya village isadeveloping village and located at the north of the Yama creek. However, there is stillaneed for space to place the necessary social items and vehicles.
ရပ်ရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကိုမြှင့်တင်ခြင်းသည် မြန်မာယန်စီ အတွက်အဓိက ဦး စားပေးလုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ မြန်မာယန်စီနှင့် မြန်မာဦးပိုင်ကုမ္ပဏီတို့သည် သတ္တုတွင်းနေရာအနီးရှိကျေးရွာများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင်လုပ်ဆာင်ပေးရန် တာဝန်ရှိပါသည်။ မြန်မာယန်စီသည်ရပ်ရွာလူထု၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို အမြဲဦးစားပေးစဉ်းစားပါသည်။ CSR ၁၈ရွာရှိသည့်အနက် မြစိမ်းကျေးရွာသည် ယမားချောင်းဘေးတွင်တည်ရှိသော ရွာတစ်ရွာဖြစ်ပါသည်။
COVID-19 ကာကွယ်ရေးသုံးပစ္စည်းများ ကျေးရွာများသို့လှူဒါန်းခြင်း
ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကာကွယ်ရန် အတွက် အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းများမှာ လက်ဆေးခြင်း၊ တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး (၃)ပေအကွာမှနေခြင်း၊ လူထူထပ်သောနေရာများကို ရှောင်ရှားခြင်း၊ အများပြည်သူနေရာများတွင် maskတပ်ခြင်းတို့ ဖြစ်ပါသည်။
ကျေးစာကျ ကျေးရွာသည် ယမားချောင်း၏ မြောက်ဘက်တွင်တည်ရှိပြီး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်နေသော ရွာတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ သို့သော် လိုအပ်သော လူမှုရေးပစ္စည်းနှင့် လူမှုကူညီရေးကားများထားရန်အတွက် မြေနေရာလိုအပ်လျက်ရှိပါသည်။